Complete Mbido Guide To Italy Site Train | Save A Train
Home > Travel Europe > Complete Mbido Guide To Italy Site Train
Ina njikere na-blown pụọ na Italy ụgbọ okporo ígwè site na oge ị na kwụpụ ụkwụ n'elu ya oké ala. The n'ala akụkọ ihe mere eme, ebube ije, karịrị omenala na ndị dị otú ahụ mara, ọkaibe na ọma-mannered ndị mmadụ ga-abụ ihe ị ga-echeta ruo gị n'ụbọchị ikpeazụ! Chọrọ mara a nzuzo? Italy ụgbọ okporo ígwè bụ akpali karị karịa gị nwere ike iche!
ugbu a, ebe ị na-aga n'ala Romeo na Juliet ụgbọ okporo ígwè, ebe a bụ ụfọdụ bara uru Atụmatụ ị ga-eleghị anya na-eso (karịsịa ma ọ bụrụ na ị mgbe na Italy na-adịghị asụ asụsụ aga were were):
Ịchọta Ụzọ Gị gburugburu Italy Site Train Ịtọ oge
N'ihi na onye na-eme njem gafee Italy ụgbọ okporo ígwè na-achọ ka ha nweta ihe ha eziokwu ọnụ, ịhọrọ:
Trenitalia, mba okporo ígwè ọrụ niile mba ụzọ gasị; ọ bụ a mgbe nile na-agba ụgbọ okporo ígwè.
Italo ụgbọ okporo, n'ihi na elu na-agba ụgbọ oloko / ụzọ gasị.
The kacha mma nhọrọ bụ lelee Italy ụgbọ okporo ígwè, na na na-na-adịghị ize ndụ n'akụkụ: tụnyere ahịa, ụbọchị na oge na-ahụ nhọrọ na kasị mma na dabara gị mmefu ego na njem gị map. Were a anya ma jiri schedules. Ị ga-eleghị anya a ga-mgbagwoju anya na ala, ya mere ebe a bụ abbreviated forms ị ga-ahụ na Saịtị Trenitalia:
Rome Termini (Central ojii) -> TE Rome
Naples Central (Central ojii) -> NA C.The
Florence Santa Maria Novella (Central ojii) -> Fl.SMN
Venice Santa Lucia ụgbọ okporo ígwè
Venice Saint Lucia (n'àgwàetiti) -> nA. S.L.
Venice Mestre (na-adịdebeghị mmiri) -> ukwu
Milan Central (Central ojii) -> MI C.le
Piazza Príncipe (Central ojii) -> ge P.P.
La Spezia Centrale (Central ojii) -> ose
Pisa Centrale (Central ojii) -> PISA C.
A ga-enwe mgbe ị na-Italy ụgbọ okporo ígwè ị ga-ahụ otu ụgbọ okporo ígwè aha na n'elu akara na nwa, sochiri ụfọdụ ndị ọzọ na-acha uhie uhie; a na-egosi na e nwere a ole na ole n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na obodo gị na-ejegharị ejegharị na-, na ụgbọ okporo ígwè na-ewere gị niile ụgbọ okporo ígwè na-akwụsị.
I Kwesịrị AKWỤKWỌ Your Italy ụgbọ okporo ígwè Ticket Online ma ọ bụ Zụrụ Ọ na Station
Oké ozi ọma banyere ntinye akwụkwọ gị tiketi ka Italy ụgbọ okporo ígwè ahụ bụ na online ntinye akwụkwọ usoro na-arụ ọrụ flawlessly na bụ ibu pụrụ ịdabere na. Stations n'ebe nile pụrụ ịbụ mmadụ jupụtara - na onye kwesịrị na ụdị nchegbu, nri? Ị na-nyere nhọrọ ma akwụkwọ ma ọ bụ na-akwụ ụgwọ gị ụgbọ okporo ígwè tiketi online. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na ị na-niile banyere spontaneity - echere ruo ị ga-esi ebe na ịzụta gị tiketi mgbe.
Cologne ka Dortmund Ụgbọ oloko
Munich na Dortmund Ụgbọ oloko
Hanover na Dortmund Ụgbọ oloko
Frankfurt ka Dortmund Ụgbọ oloko
Olee Otú Ị Ga-esi Italy ụgbọ okporo ígwè Ozugbo ị nwetara Your Ticket
Mgbe ị ga-esi Italy site ụgbọ okporo ígwè, gị ọzọ cue bụ nnukwu nghọta board. Nke ahụ bụ ebe ị ga-niile nke ozi emelitere gị mkpa. Ọ bụrụ na ị na-adịghị ahụ na osisi, anya n'ihi na a ìgwè mmadụ nke ndị guzo n'okpuru ihe nnukwu - na voila! Ọ bụrụ na ị na-edebe ihe i ụgbọ okporo ígwè e depụtara ozugbo, na-na-amalite panicking. Jide n'aka na ị na-achọ na "Partenze" (Ndị Ọpụpụ) kama "Arrivi" (Ndị mbata) zere aghara. Onye kasị nta na-agbagwoju anya nhọrọ nke niile bụ na-aga site na nọmba ụgbọ oloko na ọpụpụ oge. Mgbe ị na-ahụ gị na ụgbọ okporo ígwè, anya n'ihi na "Bin,"N'ihi na" binario " (n'elu ikpo okwu). Ozugbo ị nwetara na ota, na ị bụ nri na-aga!
E nwere bụ a egwuregwu m nụrụ otu ugboro: Mgbe ọ bụla ị na-eche jọrọ njọ ma ọ bụ na owu na-ama, gaa Italy ụgbọ okporo ígwè. N'agbanyeghị otú unseemly ị na anya, obodo ndị mmadụ ga-eti mkpu "Bella!" Agachaa gị. mara ezigbo mma, nri? Unu chere a nkeji ogologo, akwụkwọ gị tiketi na saveatrain.com na-amalite na mbukota maka Italy!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/guide-to-italy-by-train/ - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
ụgbọ okporo ígwè tiketi Train Travel travelitaly